Media Mission Nepal विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त - Media Mission Nepal
विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त
Published On : 11 March, 2019 8:33 pm
नारायण न्यौपाने । काठमाडौँ, २७ फागुन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहज र सुखद् रुपमा पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु मुलुकको शान्तिसुरक्षामा महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उहाँले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच फागुन २४ गते भएको सहमतिपछि पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलन समाप्त भई त्यसको एउटा सहज एवं सुखद् अवतरण हुनु धेरै राम्रो र सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो ।
सुरक्षा परिषद् मूख्य रुपमा समग्र राष्ट्रको सुरक्षा, देशको सुरक्षा, देशवासीको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । त्यसका निम्ति यसअघि नै रक्षामन्त्रीज्यूले सुरक्षा परिषद्का जिम्मेवारीका बारेमा अत्यन्त सङ्क्षिप्त ढङ्गले धारणा राख्नु भएको छ । परिस्थितिको विश्लेषण– कस्तो छ त परिस्थिति ? देश र देशवासीको सुरक्षा अर्थात् यस देशको सार्वभौमसत्ता, यसको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, यसका हितहरुको रक्षा, सम्वद्र्धन, भूगोलको रक्षा, अधिकारको रक्षा, मान प्रतिष्ठाको रक्षा । यिनको अवस्था के छ ? यसमा चुनौतीहरु कस्ता छन् ? समस्याहरु के छन् ? तिनको समाधान कसरी, कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ ? संविधानले नै सुरक्षा परिषद्को महत्व–राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा स्पष्ट ढङ्गले अगाडि सारेको छ । त्यस हिसाबले परिस्थितिको विश्लेषण, अवस्थाको आंँकलन, समस्या र चुनौतीहरुको पहिचान र तिनको समाधानको सिफारिश, यी सबै कुराहरु सुरक्षा परिषद्ले गर्दछ । त्यसरी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहमा पु¥याउने कामका लागि भूमिका खेल्दछ ।
यतिबेला एउटा कुरा मैले अलिकति चर्चा गर्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ, यो १८औंँ वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा देशले खुशी हुनुपर्दछ । सुरक्षा परिषद्ले आफ्ना कामका सफलतामा खुशी हुनुपर्दछ । देशका निम्ति अनेक खतराहरु हुन सक्छन्, अनेक समस्याहरु हुन सक्छन्, अनेक चुनौतीहरु हुन सक्छन् । त्यसमध्ये कहिले कहिले विखण्डनका चुनौती, कहिले–कहिले देशमा पृथकताको आकाङ्क्षा वा त्यस्ता माग र योजना पनि प्रकट हुन सक्दछ । विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा हामी देख्छौँ र हाम्रै देशमा पनि फागुन २४ गतेसम्म विखण्डनको माग, पृथकतावादी माग राखेर एउटा समूह क्रियाशील थियो । फागुन २४ गतेदेखि पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलन समाप्त भएको छ र त्यसको एउटा सहज र सुखद् अवतरण पनि भएको छ । यो धेरै राम्रो, सकारात्मक कुरा हो । बीचमा कसैले खेल्न खोज्यो भने पनि खेल्ने ठाउँ रहँदैन । कसैले त्यस मागभित्र वा त्यस आकाङ्क्षाभित्र वा त्यस आन्दोलनभित्र घुसेर केही गर्न खोज्यो भने पनि त्यो सम्भव अब हुँदैन ।